GarsoorNews - Dr. Saciid Ciise oo Dowlada Talo ka siiyay Xiisada Khaliijka
by Farah C/laahi | Sunday, Jun 11, 2017 | 107 views
Bariga Dhexe balaayada ka soo socota ma ahan wax go’aan deg deg ah laga gaari karo. Carabi ehel uma ahan Soomaalida, haddana waa dad aan wadaagno diin iyo dhaqan.
Anigu ma aaminsani inaan dhalasho wadaagno, in kasto derisnimadu ay dhalin karto kala guursasho. Sidaas oo ay tahay ayeey wadamada carabtu yihiin kuwo lagama maarman u ah danta guud ee dalka iyo dadka. Wadamadaas waxaa noloshooda ka soo saarta dad badan oo Soomaaliya oo ka shaqeysta iyo kuwo ganacsigoodu ku xiran yahay.
Khilaafka Carabta haddii lagu dhex fogaado Soomaaliya waxey ku noqoneysaa dhibaato hor leh oo sababta iney gobolada dalka lacagtooda u adeegsadaan sidii ay isaga horkeeni lahayeen,ugana horkeeni lahayeen dowladda dhexe, iyagoo weliba qaar ka mida u balanqaadaya aqoonsi gaara.
Murugada dalalka Carabta loo abuuray waa ay dhib badan tahay, mana sahlana guushu cida ay raaceyso waayo xeeladda loo dejiyey ayaa sidaas ah. Taladeenu waxey ku haboon tahay inaan sugno oo fiirino sida xaaladu isku bedeleyso, nafteenana aan ku qancino madaxbanaani xoriyad leh inaanan ku doorsan dhereg dhalanteeda oo gunimo wadata.
Soomaaliya iyada ayaa dhibaato weyn ku dhexjirta ee yeysan mid kale ku darsan Aragtida dowladu waa sax, xaaladda aan ku jirnana waxaa ku haboon inaan dhexdhexaad ka ahaano mashaqada laga dhex huriyeye wadamada khaliijka. Aan ka daawano dibeda sida wax u dhacayaan oo weliba aan yareyno xiriirada aan la leenahay wadamada is hertinaya.